Raveloaritiana Mamisoa · Novambra 2015 · Global Voices teny Malagasy
Raveloaritiana Mamisoa · Novambra, 2015
Nanomboka nandika tamin'ny 22 Febroary 2011 · 2851 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i Raveloaritiana Mamisoa tamin'ny Novambra, 2015
Mihalalina Ny Krizy Ao Burundi
Afrika Mainty10 Novambra 2015
"Manara-dia tanteraka ny nizoran'ny teo aloha nodimbiasiny mialoha indrindra ny nidiran'ny rivotry ny demaokrasia tao anatin'ny tontolo ara-politika Borondey tamin'ny 1992 izy ireo."
Firenena Latsaka An-katerena Mandritra ny 30 Andro Ny Vondro-Nosy Maldives, Mihantona Ny Zo Fototra
Azia Atsimo08 Novambra 2015
Tokony hahafantatra momba an'i Maldives ireo mpanara-baovao vahiny: 1) Mbola tsy nisy ny IED (fitaovana mety hipoaka tampoka). Krizin'ny orinasa mpamokatra izany. Tsy mbola nisy demokrasia mihitsy teto
Tantara an-tsarimiaina ‘South Park’ Nampiseho Ny Filohan'i Shina Manoroka Vehivavy. Iza Io Vehivavy Io?
Azia Atsinanana08 Novambra 2015
Niahiahy ireo Shinoa mpankafy ny tantara an-tsarimiaina South Park, fa mety ho voaràra ny tantara noho i Xi Jinping manoroka vehivavy miteny Koreana izay tsy vadiny amin'ny fiafaran'ny tantara.
Netizen Report: Lalàna Mifehy Ny Heloka Antserasera Meksikana Tsy Izy
Meksika07 Novambra 2015
Manome topi-maso iraisampirenena momba ny fanamby, fandresena, vaovao malaza mikasika ny zo an'aterineto manerantany ny Netizen Report an'ny Global Voices Advocacy.
Nahoana No Te Hanongana Ny Governemanta Ny Lehiben'ny Mpanohitra Ao Montenegro
Eoropa Afovoany & Atsinanana05 Novambra 2015
Nilaza ny tsy fahafaham-pon'ny vahoakan'i Montenegro amin'ny fitondram-panjakan'izy ireo sy ny "Serba nasionalista" na ny fihanaky ny "mpomba ny Rosiana" ao anatin'ny fiarahamonina Montenegro ny ankamaroan'ireo fampahalalaham-baovao. Tsy izany no tena tantara.
Ao Amin'ny “Cafe de Monk” Ao Japana, Afaka Misotro Kafe, Mihinana Mofomamy Ary Misy Mihaino Ireo Niangana Tamin'ny Tsunami
Efa ho dimy taona lasa izay ny nisian'ny tsunami sy ny loza ara-nokleary tao Japana, an'arivony ireo izay mbola mijaly ny voka-dratsin'izany. Ka nanangana fisotroana kafe vonjimaika ny moanina Bodista Japoney iray mba hamaly ny filàn'izy ireo.
Voka-pifidianana Mamoaka Izay Mety Ho Fandehan'ny Fifidianana Hafa Ao Azerbaijan
Azia Afovoany sy Kaokazy04 Novambra 2015
Tsy tena fifidianana no natao tamin'ny Alahady tao Azerbajian ary tsy tena parlemanta ilay vaovao, saingy tsy dia miraharaha izany ny fianakavian'ny fitondrana.
Mihevitra Hampiditra Ny ISIS Ho Ao Anatin'ny Lisitry ny “Fikambanana Tsy Miankina Tsy Iriana” Ny Mpanao Lalàna Rosiana
Eoropa Afovoany & Atsinanana03 Novambra 2015
Voalaza fa manomana lisitra fanampiny vaovao ao anatin'ny "lisitra-farany" misy ireo fikambanana tsy miankina ny loholona, mitady handràra ireo vondrona vaovao maromaro, anisan'izany ny vondrona ISIS mahery fihetsika tsy ara-dalàna sy efa voaràra ao Rosia.
Namerina ny Antoko Maro An'isa Ho Eo Amin'ny Fitantanana Ny Fifidianana Naverina Tao Tiorkia
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana02 Novambra 2015
Tamin'ny ankamaroan'ireo vato nisaina tamin'ny fifidianana tao Torkia, tafaverina teo amin'ny fahefana ny antokon'ny fitondrana AKP izay nahazo ny maro an'isa. Raha nanao fankalazana ny antokon'ny fitondrana, nifandona tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tao an-tanàna maro mponina Kiorda ao Diyarbakir kosa ny polisy.